Fivarotana fiara an-tokotany ivelany sy trano fonenana 3x6m miaraka amin'ny tranolain'i Sidewalls sy Greenhouse | Winsom
Seranan-tsambo an-dalambe sy trano fonenana 3x6m Miaraka amin'ny Sidewalls
10-29 sekely 30-49 Taratasy > = 50 Taratasy
Ity canopy ity dia mety amin'ny fametrahana alokaloka sy toerana fitahirizana ny fiara, mopeds, bisikileta na entana hafa any ivelany. Azonao atao koa ny mametraka azy ao an-tokotaninao ho toy ny tara-masoandro midadasika sy mahafinaritra hahafinaritra ny fianakavianao sy ny vahininao.
2) bokotra lohataona eo amin'ny tonon-doha ho an'ny fanamorana mora sy hidina.
3) Seam-baravarana ambony rakotra tombo-tsindry, waterproo.
Laharana modely WS-CS136
Anaran'ny entana Seranan-tsambo an-dalambe sy trano fonenana 3x6m miaraka amin'ny Sidewalls
Spigrafaly. Dia 42 * 1,4 / 38 * 1.0mm fantsona vy misy coated fotsy
13x20ft (3x6m) Famoronana matihanina
Ny carport 10'X20 'dia manasongadina ny rano miaro amin'ny rano sy ny hafanana be vita amin'ny polyethylene ary ny bika vy 38mm Diameter izay vovony voaroy mba hiantohana ny fiarovana fiarovana, ny fikorohana ary ny porofony. Io mora ny napetraka ny carport dia tonga lafatra amin'ny fanomezana alokaloka & fitahirizana ho an'ny fiaranao, sambonao na entana hafa.
Na ny fiara matanjaka aza dia mahazo tombony amin'ny trano fitobianay eny ivelany. Miaraka amin'ny fanamboarana vy vita amin'ny vy sy ny lamba matevina sy rano miady UV (polyethylene) mateza, ity fiara ity dia manome fiarovana tsara. Ny kitapo fantsom-piantsonana mavesatra amin'ity entana ity dia manampy ny antoka fa ny fiaranao dia azo antoka foana amin'ny karazan-toetrandro ratsy indrindra. Tsy misy ahiahy raha mitondra kamiao lehibe kokoa na SUV ianao, satria ny fiara samy manana ny fiara dia mandanja 10 'L x 20' W, naorina ho an'ny fiara lehibe indrindra. Nahatratra anao izahay rehefa tonga amin'ny fitehirizana fiara mandeha amin'ny alàlan'ny fanomezana fiarovana tanteraka amin'ny singa masiaka amin'ny vidiny mora.
Ny fitaovana PE fanamafisana dia fitaovana famonoana ambany, rano ary anti-UV. Ny lamba vita amin'ny indostrialy Cover lamba dia maharitra maharitra sy fiarovana.
Sisin'ny efijery azo esorina miaraka amina varavarankely fantsom-baravarankely mazava, ary ny varavarankely tsirairay dia manana rakotra varavarankely any ivelany ahafahan'ny jiro.
Ny kalitao matevina, matevina mavesatra vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Ny tsato-by tsirairay dia manana tsindry bokotra mba hamehezana azy ireo haingana ary hihazona azy ireo amin'ny toerany. Ny goavam-paty fotsy dia misy lavaka efa namboarina mba hamatorana ny tady bungee ary hamafisina amin'ny grommets hisorohana ny tsipika tsy hikorapaka. Ny tady bungee dia mora mametaka ny lavaka ary avy eo mandondona manodidina ireo tsangambato vy azo antoka.
Lisitry ny fonosana ho an'ny fanondroana anao. Ho fanampin'izay, isaky ny andiany dia hametraka torolalana amin'ny fivoriambe any anaty baoritra ho anao ianao.
Previous: Trano plastika vita amin'ny plastika ho an'ny fambolena 6x3x2m
Manaraka: Fivarotana entana mivarotra any ivelany ho an'ny antoko
Kanopy fiarovana amin'ny garazy
Fivarotana fiara fitaterana fiara
Tendrombohitra fitehirizana fiara
Fipetrahan'ny fiara any ivelany
Kodiaran-tsofina azo entina amin'ny rano 10′x2 ...